Archive du 26-juil-2021
Nivatratravatra ny mpanohitra « Miala ny Filoha, atsangana ny Repoblika faha 5 »
Nahitsy ary tsy nihambahamba ny mpanohitra nikaon-doha tetsy amin’ny Espace Ri La Tsio ny sabotsy teo nilaza 23-24 jolay teo,
Valala nosamborim-boka ?
Resabe mbola mitana ny sain’ny maro hatramin’izao ilay raharaha famonoana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Mifamahofaho ny toe-draharaha ara-politika, ary samy manana ny androritany azy.
CUA sy polisim-pirenena Hiara-kiasa akaiky amin’ny fanazarana ireo mpampiasa lalana
Nanamafy ny fiaraha-miasa misy eo aminy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny Polisim-pirenena. Tontosa tamin'ny Sabotsy teo ny fifanaovan-tsonia teo amin'ny Minisitry ny filaminam-bahoaka Fanomezantsoa
Fikasana hamono ny Filoha Jeneraly misotro ronono roa nampanantsoina
Raha ny loharanom-baovao azo omaly, dia nampanatsoin’ny Mpitandro filaminana etsy amin’ny sampana heloka bevava Fiadanana ny manamboninahitra Jeneraly misotro ronono miisa roa.
Orinasa Rio Tinto QMM Hampiasa angovo azo havaozina, hamatsy an’i Taolagnaro
Mikendry sy mametraka tanjona amin’ny hananany fahaleovan-tena amin’ny angovo ny orinasa Rio Tinto QMM ao
Ady amin’ny coronavirus Vaksiny Johnson & Johson 302 400 no ho avy
197 000 eo no natao vaksiny tamin’ny andiany voalohany, iray volana lasa izay. Nanafatra ny andiany faharoa, ho tonga amin’ny voalohandohan’ny volana aogositra, ary manamafy izany aho.
Fiatrehana ny bakalorea Tokony hihinana sakafo be otrik’aina sy maro loko ireo mpiadina
Ankoatra ny famerenan-desona faramparany mafy izay heverina fa mety hahazoana fahombiazana mandritra ny fanadinam-panjakana Bakalorea
Fikasana hamono ny Filoha Inona no mety ho antony ?
Herinandro izao dia mahoraka tsy eto Madagasikara irery ihany fa efa maneran-tany mihihitsy ny hoe nisy nikasa hamono ny filoha Andry Rajoelina.
Rina Randriamasinoro “Iray tsy mivaky ny TIM hatreto”
Naneho hevitra momba ny resabe mikasika ny Antoko Tiako I Madagasikara ny Sekretera Jeneralin’ny Antoko TIM Atoa Rina Randriamasinoro ny sabotsy taorian’ny famaranana ny fikaonan-dohan’ny mpanohitra,
Lalam-pirenena faha-4 Mitombo isa ireo faritra misy fahasimbana
Niova tanteraka ny asa fitondrana fiara sy moto miazo ny lalam-pirenena fahaefatra amin’izao noho ny haratsian’ny lalana.
SECES Antananarivo Manainga ny fitsarana hamoaka didy farany henjana
Nanao fanambarana ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra, sampana Antananarivo,
Flyover Anosizato sy Andohatapenaka Mbola tsy mazava hoe rahoviana no hanomboka ny asa
Kely sisa dia ho vita sy ho tokanana ny any Ouagadougou, renivohitr’I Burkina Faso, raha ny mikasika ny fananganana itony lalana marolafy sy mifanaingina na antsoina hoe “Flyover” itony no resahana.
Tetikasan’i Jesosy Kristy ho an’izao tontolo izao Hanampy betsaka amin’ny fampiharana ny fahamarinana ny ISPPS
Ankoatra ny maha-sekoly ambony tsy miankina ny ISPPS tarihin-dRamahirana Gerard dia miezaka ihany koa izy ireo amin’izao fotoana mitory sy manaparitaka ny ambaindahin’ny ny
Fikasana hamono ny filoha Malagasy Mametra-panontaniana ny mpahaipolitika ao Frantsa
no nitranga teto Madagasikara mikasika ny raharaha fikasana hifofo ny ain’ny filoham-pirenena malagasy? Ho hita eo, hoy ny fandinihana,
Fanajana ny zon’ireo voarohirohy Miditra an-tsehatra ny Frantsay
Namoaka fanambarana ny Frantsay tamin’ny alalan’ny Quai d'Orsay tamin’ny faran’ny herinandro teo iny, fa afaka mangataka tantsoroka avy amin’ny kaonsilà eto ireo olony voarohirohy tamin’ilay raharaha fikasana
Tambazotra Telma Tsy fantatra mazava ny anton’ny fikorontanana
Tao anatin’ny herinandro teo izao no nahatsikaritra fikorontanana teo anivon’ny tambazotram-pifandraisan-davitra Telma ny ankamaroan’ireo mpanjifa.